Igbo, Romans, Lesson 019 -- Man is Saved not by Knowledge, but by Works (Romans 2:17-24) | Waters of Life
Home -- Igbo -- Romans - 019 (Man is Saved not by Knowledge)
c) Ọ bughi ihe omuma ka azọpụtara madụ, kama ọ bụ n’ọlu (Ndi Rom 2:17-24)
NDI ROM 2:17-24
17 N’ezie a kpọrọ gị onye Juu, ma dabere n’iwu, werekwa Chineke were nganga, 18 mara uche ya, ma kwado ihe dị mma, ebe ana-ezi gị iwu, 19 ma nwee ntụkwasị obi na gị onwe gị bụ ntuzi aka nye ndi kpuru ìsì, ìhè nye ndi nọ n’ọchịchịrị, 20 onye-nzuzu onye nzuzu, onye nkuzi umu aka, ndi nwere ụdị omuma na ezi n’iwu. 21 Gi onwe-gi, onye n teachzí onye ọzọ ihe, ì dighi zí onwe-gi? Gi onye n preachkwusa na nwoke adighi-ezu ohi, ì n stealzu ori? 22 Gi onye nāsi, Akwala iko, ì nākwa iko? Gị onye na-akpọ arụsị asị, ị̀ na-ezu ohi ụlọ arụsị? 23 Gị onye ji iwu anya isi, ị na-akparị Chineke site n'imebi iwu? 24 N’ihi na “a kwuluru aha Chineke n’etiti ndị mba ọzọ n’ihi gị,” dị ka e dere ya.
Chineke nyefere ụmụ Abraham ihe ùgwù nke Iwu nsọ, nke gbara akaebe banyere ịdị ukwuu na nsọpụrụ nke Chineke. Ndị Juu ghọtara uru Iwu ahụ bara. Ha tụkwasara obi na ya, site n'ihe ùgwù a gbagwojuru ha anya, ma chee na nke a ga-ewetara ha igwe, ebe Iwu, n'eziokwu, bụ ihe kpatara iwe na ịma amamikpe n'ihi omume ha.
Pol ama esikot nti edu ye nti edu emi ekenimde mme Jew. Nkpughe nke Chineke nyere ndị nke ala ịkpa nwayọ, ntụkwasị obi, na nganga, n’ihi na ha matara Chineke na uche ya. Ha ghọtara ụzọ kacha mma na ndụ, wee bụrụ n'oge gara aga ndị nkuzi nke ndị dị iche iche, na ìhè nke mba niile.
N’aka nke ọzọ, Pọl mesiri ha obi ike na Iwu ahụ enweghị ike ịgbanwe mmadụ. Ọ bụ eziokwu na site na ya, ndị Juu maara ihe iwu ji ha ime, mana ha anaghị arụ ọrụ ha. Ha mara ihe omimi nke Chineke, ma ha adighi-eje ije n’ime ha. Ọtụtụ n'ime ha ruru ogo dị elu nke iwu ikperechi na mkpebi siri ike. Ot'odi, emeghi ka uche Chineke puta n’ime obi ha.
Ikekwe ha ezughi ohi ohi, mana anya anya ha kpuchiri anya ha. Ikekwe ha akwaghị iko mgbe niile, mana obi ha jupụtara na echiche na-adịghị ọcha. Ha mebiri Iwu nke Chineke ọtụtụ puku ugboro. Ke adianade do, Pol ama okụt unana ima ke uwem mme andinịm ke akpanikọ. Ha mekpuru Chineke site na nmehie nile ha ma mee ka mba ndị ọzọ kwulu aha nsọ Ya.
Pol bu onye Juu nke ndi Ju wee dere ede, ewezuga nzuzu nke ike ya, akuko nile nke ndi ya. N’ihi nkwupụta a, o nwere ikike na ikike ikpughere mmehie na asịrị nke mba ya; na ọ dịghị ihe fọdụrụ n’ezi omume ya ma e jiri ya tụnyere nnukwu mmehie ya na mmejọ ya. Enweghi mkpesa karịa mmadụ ọ bụla ma ọ bụ mba karịa ikwu na a kwuluru aha Chineke n'ihi omume ha. Ha anabataghị ọkpụkpọ oku mbụ ha ka ha wee jiri Iwu dochie ndị mmadụ. A sị na anyị ga - ahụ n ’ụbọchị dị ike onye nwere obi ike dịka Pol, onye na - anaghị agọnarị ihe ùgwù anyị, kama ọ na - ewepụ nkpuchi nke ime mmụọ n’ihu ọha mmadụ rụrụ arụ na ọ nweghị ihe ga - adịgide ma ọ bụrụ na nchegharị na mmebi.
I nwere na-ata ndi nke Abraham ikpe? Kpachara anya! Ha bụ ndị mmehie dị ka gị.
Chineke kwuru n'ụzọ doro anya: “Dị nsọ, n'ihi na adị m nsọ”. Gi bụ ezigbo onye Kristi zuru oke dịka Nna gị nke eluigwe? Ìhè gị na-enwu n’ihu ndị mmadụ ka ha wee hụ ọrụ ọma gị wee too Nna gị nke bi n’eluigwe, n’ihi mgbanwe pụtara ìhè na ndụ gị? Ndi enyi gi na-eleda okpukperechi gi anya, nihi na odighi mma karie ndi n’ekwu na mgbaputa nke Kraist? Gi nwere ihe kpatara ikwulu Chineke? Nna anyị nke eluigwe nwere ike ikpughe onwe ya site n’ịhụnanya gị na obi umeala gị?
EKPERE: Chineke di nso ma di uku, nmehiem kariri m mara. Na nnupụisi m na ihu abụọ m, aghọziri m onye mere m ji kwulu ọtụtụ ndị. Gbaghara m mgbe mmadụ kwuluru aha nsọ gị, n'ihi na anaghị m eje ije n'ihu gị. Gbaghara m ịhụnanya na-ezughi oke, na-adị ọcha, na ndidi m. I kere m n’onyinyo gi ka ndi ozo wee hu gi n’ime m; ya mere nyere m aka irube isi n’iwu gị ma soro ihe nlere gị ka onyinyo gị wee na-enwu n ’enwu n’ enwu n’ime m. Zọpụta m n'adịghị ike m, mmejọ m na onwe m.
Page last modified on January 25, 2021, at 03:37 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)